I-china izenzekelayo isantya esiphezulu seVarnishing kunye necalendering Machine mveliso kunye nabathengisi | Sunkia
♦ Lo matshini wamkela uhlobo lwamanzi okususa isixhobo, esinokuthi sisuse uthuli kwi-inki yokuprinta kwaye siphucule umgangatho wemveliso. Intloko yokuhanjiswa kweoyile yamkela ivili yerabha yokusebenza eqinileyo kunye neyomeleleyo, imela yeoyile echanekileyo yokucoceka kulula ngaphandle kokulimaza itanki yeoyile. Imela inokusetyenziswa ixesha elide. Ngaphaya koko, ukubonda kwephepha elingasemva kunokuhlala kugcinwa.
♦ Iliso lombane lokumisa kwisitya sensimbi sokuhambisa, sebenzisa iliso lombane elikude elikude elingeniswa elizweni, uphephe iliso lombane ekuvezweni kubushushu obuphezulu, kwaye wandise ubomi benkonzo.
95kw (Uhlobo lokufudumeza ngombane), 38kw (Uhlobo lomphunga)
I-102kw (Uhlobo lokufudumeza ngombane), 40kw (Uhlobo lomphunga)
Ubukhulu (L * W * H) mm
Egqithileyo Isantya esiphakamileyo seSantya esiSebenzayo esiSebenzayo seWindows Machine (Iglu esekwe emanzini / iGlu elinamafutha / Ifilimu eyakhelwe ngaphambili)
Okulandelayo: Isantya esizenzekelayo ngokugcweleyo esineentloko ezine Umatshini weVarnishing UV (uhlobo olunemisebenzi emininzi) bokudaya, ubuchule, ukuThambisa i-Matte